Fananan-trano hofaina ao Islamabad, Islamabad Capital
Real Estate Listings: » All Others Real Estate » All Others Real Estate » PK » Islamabad » Islamabad » Fananan-trano hofaina ao Islamabad, Islamabad Capital1
Mitady trano any G-11 ve ianao? Tapitra ny fikarohana nataonao! Ny fikarohanao trano Marla 5 ho an'ny fampiasam-bolanao dia any amin'ny toerana haleha. Aza mitady lavitra intsony fa manana trano tsara indrindra mifanentana tsara amin'ny vola takinao izahay. Fandriho amin'ny trano avo roa heny io trano fanofana io, alohan'ny isa hafa! Raha manana teti-bola 30.000 Rs ianao dia ity ny lisitra tsy maintsy jerenao. Fotoana izao hamandrihana ny tranonao ao amin'ny G-11, G-11. Azonao atao ny mifandray aminay izao hahafantarana azy rehetra.
Red Stone Marketing
Islamabad (; Urdu: اسلام آباد, Islāmābād) dia renivohitr'i Pakistan, ary fehezin'ny federasiona dia tafiditra ao amin'ny faritany renivohitra Islamabad. Islamabad no tanàna fahasivy lehibe indrindra any Pakistan, raha ny faritany metropolitan Islamabad-Rawalpindi lehibe kokoa no firenena fahefatra lehibe indrindra ao amin'ny firenena misy mponina 7,4 tapitrisa eo ho eo.Manorina ho tanàna efa natao tamin'ny taona 1960 hanoloana an'i Karachi ho renivohitr'i Pakistan, i Islamabad no voatonona ho azy fitsipi-piainana avo lenta sy fiarovana ary ahitra maitso. Ny tanàna no seza ara-politika ao Pakistan ary ny fikambanan'ny governemanta eo an-toerana dia tantanan'ny Fikambanana Islamabad Metropolitan, tohanan'ny Capital Development Authority (CDA). Islamabad dia ao amin'ny Plateau Pothohar any amin'ny tapany avaratra-atsinanana, eo anelanelan'ny Distrika Rawalpindi sy ny zaridainam-pirenena Margalla Hills amin'ny avaratra. Ny faritra dia nanan-tantara dia ampahany amin'ny lalamby any Punjab sy Khyber Pakhtunkhwa miaraka amin'ny Margalla Pass mihetsika ho vavahady eo anelanelan'ny faritra roa.Ilay drafi-pandraisan'ny tanàna, namboarin'ny mpanao mari-trano grika Constantinos Apostolou Doxiadis, mizara ny tanàna ho zona valo, ao anatin'izany. fitantanana, diplaomaty ara-diplaomaty, faritra fonenana, sehatry ny fanabeazana, sehatra indostrialy, faritra ara-barotra, ary ambanivohitra sy maitso. Ilay tanàna dia fantatra amin'ny fisian'ny valan-javaboary sy ala marobe, ao anatin'izany ny Margalla Hills National Park sy Shakarparian Park. Ny tanàna dia toeran'ny marika maromaro, ao ny Faisal Mosque, ny moske lehibe indrindra any Azia Atsimo sy ny fahefatra lehibe indrindra eto an-tany. Ireo mari-pamantarana hafa dia ahitana ny tsangambato Nasionaly sy ny Demaokrasia ao Pakistan.Islamabad dia tanàna maneran-tany gamma; Izy io dia voasokajy ho Medium on the Human Development Index, miaraka amin'ny HDI 0.678, avo indrindra any amin'ny firenena. Ny tanàna dia manana ny vidim-piainana lafo indrindra ao Pakistan, ary ny mponina ao aminy dia anjaran'ny olom-pirenena antonony sy antonony ambany. Amin'ny maha-tanàna lafo vidy, ny vidin'ny voankazo, legioma sy akoho betsaka dia nitombo tany Islamabad nandritra ny taona 2015-2020Ny trano dia tranon'ny oniversite roapolo, anisan'izany ny Bahria University, Quaid-e-Azam University, PIEAS, Institut fampahalalana COMSATS Teknolojia sy INDRINDRA. Ny tanàna dia iray amin'ireo antoka azo antoka indrindra ao Pakistan, ary manana rafitra fanaraha-maso mivelatra miaraka amin'ny fakantsary CCTV 1 900.
950,000 PKR / Isam-bolana
500,000 PKR / Isam-bolana
420,000 PKR / Isam-bolana
1,600,000 PKR / Isam-bolana
260,000 PKR / Isam-bolana